နတ်မိမယ်လေး တစ်ပါး လို ဆွဲဆောင်မှုတွေ ရှိ စွာ လှရက် လွန်းနေ တဲ့ နန်းဆုရတီစိုး – Let Pan Daily
နတ်မိမယ်လေး တစ်ပါး လို ဆွဲဆောင်မှုတွေ ရှိ စွာ လှရက် လွန်းနေ တဲ့ နန်းဆုရတီစိုး
ပရိသတ်ကြီးရေ.. နန်းဆုလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ အပြင် သီချင်းကောင်းလေးတွေသီဆိုတတ်တဲ့ အနုပညာရှင် မင်းသမီးချောလေးကို မြင်ယောင်မိမှာပါနော်..။ အေးချမ်းပြီး ကျော့ရှင်းလှပလွန်းတဲ့ အလှတရားတွေအပြင် အရွယ်တင်လှပျိုနေတဲ့ သူမကိုတော့ ယောက်ျားလေးပရိသတ်တွေအမြင် မိန်းကလေးပရိသတ်တွေကပါ ချစ်ခင်နေကြတာပါ..။
ဆွဲဆောင်မှုတွေရှိရက်လွန်းစွာ လှသွေးကြွယ်လွန်းနေတဲ့ နန်းဆုလေးကတော့ သူမရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို အမြဲမျှဝေခေ့ရှိသလို အခုတစ်ခါမှာ ချစ်စရာပုံရိလေးတွေနဲ့ ဖမ်းစားလိုက်ပြန်ပါတယ်နော်..။ နတ်မိမ်ာလေးတစ်ပါးလို လှသွေးကြွယ်စွာ ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကတော့ မြင်သူပရိသတ်တွေတိုင်းကို အချစ်ပိုစေမှာ အသေအချာပါပဲနော်..။ “မင်းရင်ထဲမှာပဲနေမယ် …….
Your Princess. .” ဆိုပြီး လှရက်လွန်းနေတဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို နန်းဆုက ပြန်လည်မျှဝေထားတာပါနော်..။ ဆွဲဆာင်မှုတွေ ရှိရက်လွန်းနေတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော်လေး နန်းဆုရတီစိုးရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကိုတော့ အရိသတ်တွေလာ်း မချစ်ဘဲမနေနိုင်အောင် သဘောကျနေကြမှာပါနော်..။
Photo Credit – Mie Mie Lay
ပရိသတျကွီးရေ.. နနျးဆုလို့ဆိုလိုကျတာနဲ့ ခဈြစရာကောငျးလှနျးတဲ့ ပုံရိပျလေးတှေ အပွငျ သီခငျြးကောငျးလေးတှသေီဆိုတတျတဲ့ အနုပညာရှငျ မငျးသမီးခြောလေးကို မွငျယောငျမိမှာပါနျော..။ အေးခမျြးပွီး ကြော့ရှငျးလှပလှနျးတဲ့ အလှတရားတှအေပွငျ အရှယျတငျလှပြိုနတေဲ့ သူမကိုတော့ ယောကျြားလေးပရိသတျတှအေမွငျ မိနျးကလေးပရိသတျတှကေပါ ခဈြခငျနကွေတာပါ..။
ဆှဲဆောငျမှုတှရှေိရကျလှနျးစှာ လှသှေးကွှယျလှနျးနတေဲ့ နနျးဆုလေးကတော့ သူမရဲ့ပုံရိပျလေးတှကေို အမွဲမြှဝခေရှေိ့သလို အခုတဈခါမှာ ခဈြစရာပုံရိလေးတှနေဲ့ ဖမျးစားလိုကျပွနျပါတယျနျော..။ နတျမိမျာလေးတဈပါးလို လှသှေးကွှယျစှာ ခဈြစရာကောငျးလှနျးနတေဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေတော့ မွငျသူပရိသတျတှတေိုငျးကို အခဈြပိုစမှော အသအေခြာပါပဲနျော..။ “မငျးရငျထဲမှာပဲနမေယျ …….
Your Princess. .” ဆိုပွီး လှရကျလှနျးနတေဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပျလေးတှကေို နနျးဆုက ပွနျလညျမြှဝထေားတာပါနျော..။ ဆှဲဆာငျမှုတှေ ရှိရကျလှနျးနတေဲ့ ပရိသတျအခဈြတျောလေး နနျးဆုရတီစိုးရဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေိုတော့ အရိသတျတှလျေား မခဈြဘဲမနနေိုငျအောငျ သဘောကနြကွေမှာပါနျော..။
ငါပိုငျဆိုငျ ခဲ့တဲ့ အရာတှေ အားလုံးပွနျယူမယျလို့ ကွိမျးဝါး လိုကျတဲ့ အောငျလအနျဆနျး
အမိုက်စား ခန္တာကိုယ်ကောက်ကြောင်း အလှတွေပေါ်လွင်အောင် မိမိုက်လွန်း နေတဲ့ မေပန်းချီ